95 Milyan Oo Muslimiin Ah Oo Xogtooda Laga Iibiyay Ciidammada Mareykanka – somalilandtoday.com
(SLT-Paris)-Dadka Faransiiska ah ee isticmaala app-ka salaadda ee Muslim Pro, ayaa maxkamad la tagaya shirkadda maamusha, oo lagu eedeeyey inay iibisay xog u gacan gashay ciidammada Mareykanka, waxaa sidaas sheegay qareenadooda.
Muslim Pro ayaa sheegta inay ku xidhan yihiin 95 milyan oo qof oo kala jooga dunida dacalladeeda.
Dad hore u isticmaalay app-kan, ayaa dacwaddan furay kadib markii warbaahinta qaar ay sheegeen inay xogta dadka la wadaagtay shirkado ku xidhan ciidamada Mareykanka.
Kiiskan ayaa la filayaa in maxkamad laga diiwaan geliyo maanta oo salaasa ah.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii warbaahinta Mareykanka ee Vice ay toddobaadkii tegay sheegtay in ciidammada Mareykanka ay xogta halka ay joogaan dadka ku xidhan ka iibsatay dhowr app oo ka jira meelo kala duwan oo caalamka ah.
Shirkaddan ayaa xogta ka iibisay shirkad lagu magacaabo X-Mode, oo kadibna ka iibisaya ciidammada Mareykanka oo ay qanadaraas kula jirto, sida ay sheegtay Vice.
Shirkaddan oo uu aasaasay qof Faransiis ah oo fadhigiisu yahay dalka Singapore ayaa sidoo kale sheegtay inay billaabeyso baadhitaan gudaheeda ah.